Waa maxay Suuq-geynta Dijitaalka ah | Suubbis Blog
Suuq-geynta dijitaalka ah wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo Qalab ah oo wada shaqeynaya
si loo abuuro xiisaha, korriinshaha, iyo iibsashada dhow ee ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aad ogtahay ka bixitaanka xeeladeynta suuq-geynta iyo sida ay u caawin karaan ganacsigaaga haddii aad rabto inaad ka hesho miisaaniyadda suuqgeynta
Aynu bilowno su’aasha ugu caansan – waa maxay maareynta warbaahinta bulshada (what is social media management?)
Tani waa su’aal aan inta badan waydiisanno Suuqa LYFE, sababtoo ah waxaan haynaa jawaabta! Waxaa dhici karta inaad la socotid warbaahinta bulshada sida Facebook ama Twitter. Laakiin ma taqaanaa sida janaaladan loo isticmaalo si ay u koraan ganacsigaaga yar? Aqoonsiga waxa ah social media management ee ganacsigaaga ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaaraya isticmaalka janaalka bulshada si wax ku ool ah si kor loogu qaado garitaan ka waxa aay hegsanaayaan.
Manta, Waxaan Ka jawaabi Doonaa Dhammaan Su’aalaha ayadoo Lamaraayo Ciwaanka ku Saabsan oo ah
“What is social media management?” Kadibna, waxaanu faahfaahin dheeraad ah ka bixin doonaa sababta waa muhiim u tahay waana inaad ka wada hadashaan sida the social media management. waxaay tahay kadib marka aad wax ka ogaato
Waa Maxay Social Media Management?
Social media management waa habka lagu maamulayo isdhexgalkaaga internetka iyo waxyaabaha ku dhex jira janaalada warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, iyo Pinterest.
Social Media Management ayaa ka baxsan oo kaliya soo dhajinta waraaqaha warbaahinta bulshada ee shirkaddaada aay isticmalaan maraka qaar. Waxa kale oo ka mid ah in la dhagaysto ka tirsan dhagaystayaashaada oo raadinaya fursado cusub si kor loogu qaado Garitaanka iyo Halitaanka waxaa la radinayo oo ah in aad suug-geyn dijitaal ah la helo. Halkan waxaa ku yaal dhawr ka mid ah hawlaha ku lug leh
Doorashada Social Media Management oo laga helay warbahin saxda ah
Ka hor intaadan bilaabin waxa suragalinayo social media management waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso waxa ugu fiican ee warbaahinta bulshada ee ugu wanaagsan Xaga ganacsigaaga.
Waa kuwaan hada sikooban ugu hadli doona iyo sida aay u joogaan heerarka kala duwan iyo faa’idooyinka ay ku siin karaan ganacsigaaga:
Facebook – Facebook ayaa ku dhawaad 2 milyan oo qof oo bil walba ka dhex shaqeeya facebook aygoo ku hormarinaayo ganacsigooda dad kaas oo ka yimid asal kala duwan. Waxaa sidoo kale jira isku dheelitirnaan wanaagsan oo ah jinsiga iyo kooxo da ‘ah marka ay timaaddo isticmaalaha Facebook. Tani waxay ka dhigi doontaa mashaariic bulsho oo weyn oo loogu talagalay ganacsiyada si aay isku dayayaan in ay gaaraan dhagaystayaal(vistors) Badan.
Instagram –Instagram waa social media channel oo weyne oo sumad u ah in la abuuro waxyaabo badan oo muuqaal ah. Dadka istimaala yaasha Instagram waxay u muuqdaan inay ku jiraan dhinaca yaryar iyada oo aay isticmaalaayo haween badan oo ka badan kuwa isticmaala instagram kuwaas oo ah rag. Tani waxay noqon kartaa goob weyn oo loogu talagalay ganacsiyada iibiya alaabo ama adeegyo la xiriira qaab-dhaqameed, qaab nololeed, farshaxan, ama warshado kale oo muuqata.
Twitter – Twitter ayaa leh 328 milyan oo qof oo isticmaala sitoos ah adduunka oo dhan waxayna u egtahay in ay isticmaalaan twitter. Sidoo kale waa meel aad u wanaagsan oo loola wadaago waxyaabo leh saamileyaal iyo shakhsiyaad kale oo laga yaabo in ay helaan qiimo aad ugu fican.
LinkedIn – LinkedIn waa mashruuca warbaahinta bulshada ee loogu talagalay magaca B2B ee bartilmaameedsanaya ganacsiyada iyo wershadaha kala duwan. Iyada oo LinkedIn, waxaad ka heli kartaa, isdhexgalin kartaa, oo aad la wadaagi kartaa nuxurka dadka oo ku saleysan nooca shirkadda, warshadaha, ama shaqalinimadaado.
YouTube – YouTube ayaa noqotay qaybta labaad ee ugu weyn ee wax laga raadiyo adduunka, waxaa ka horeya oo kaliya Google. Waxaad soo galin kartaa waxyaabaha aad ku duubaneysid janaalka si aad uga caawiso inaad la xiriirto oo aad ula xiriirto dhagaystayaashaada qaab muqaal ah. Iyadoo marti-gelinta janaalkaga uusan xadidneyn, ganacsigaga waxaad usoo bandhig dartaa janaal kaga adigoo marayo qaab muqaalo ah
Pinterest – Pinterest waa janaal kale oo weyn oo lagu wadaago nuxurka odorosta(Estimation) muuqaalka. Tani waxay noqotey mid loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo xiiseynaya DIY, farshaxanka, hagaajinta guriga, nafaqada, jirdhiska, iyo wixii la mid ah kusoo bandhigayo halkaas.
Waa maxay maareynta warbaahinta bulshada.